Ngesizathu esithile, ukuhleleka kobuhle besifazane kubhekwa njengobuncane kakhulu, izibalo zesifazane. Ngeshwa, amantombazane asondelene kuphela ahlala ayenamakhombandlela abathandayo abakhiqizi isikhathi eside. Futhi yini okufanele uyenze ngobuhle obuhle? Ngemuva kwalokho, ngezinye izikhathi kunzima ukuthola izingubo zokuma ezizofanelana nabesifazane abancane futhi zigcizelele isithunzi sabo, okuyinto i-hudyshki engayiphupha ngayo kuphela. Kuthiwani uma kungekho lutho olufanele emakethe? Impendulo ilula - thunga! Ama-Blouses, ama-sarafans ehlobo, izingubo, izigqoke - zonke lezi zembatho zizofanelana ngokuphelele kulo mfanekiso, uma zithunywe ngabanye.
Isitayela esifanele yisibopho sesithunzi esihle
Ukuphelela kuhlukile, yingakho owesifazane ngamunye kufanele aqaphele izici zobuntu bakhe ukuze akhethe izingubo ezifanele:
Ama-blouses, ama-blazing ehlobo akufanele abe namahlombe avulekile noma umkhono ¾, ngakho-ke lokhu kuzogcizelela ukugcwala kwezandla.
Abesifazane be-Pyshnogrudym ngeke bahambisane nezingubo ezivulekile futhi, kuzoba kuhle kakhulu ukubuka.
Indwangu enkulu yokuphrinta izokwandisa kuphela ivolumu.
Indwangu efanelekayo ayiyikuyenza ibe yinkimbinkimbi, kodwa izogcizelela amafutha ahlala esifundeni sesinqe. Noma kunjalo, izingubo zokugqoka ngeke zenze isifuba esihle.
Indlela yokukhetha ukuma kwe-blouse
Ama-blades asehlobo e-albhamu egcwele ayenzeka ngohlobo oluhlukile, futhi ukuwakhetha kuyadingeka kuye ngesayithi lezinkinga zomzimba. Imodeli ye-blouse ekhethiwe kahle ngeke ifihle kuphela ukushiyeka kwalesi sibalo, kodwa futhi igcizelele kahle izinzuzo nezinhlangothi ezinhle:
Uma inkinga yakho ingumathanga ogcwele, i-blouse-tunic ngesimo se-trapezoid enezinwele ezincane ezithandwayo kuyoba yindlela enhle. Lesi simo se-blouse sizofihla ukugcwala kwamathanga nesisu.
Ukufaka okusobala endaweni yesifuba kuyokwandisa intamo.
Indwangu emgqeni omncane oqondile uzodonsa isibalo. Izingosi ezingaphezulu, i-slimmer the silhouette. Futhi iphethini enephethini ediagonal izobukeka kahle.
Ukugcwala kwezandla kufihla imikhono evuliwe.
Indlela yokukhetha umbala
Ukukhetha amamodeli ama- blouses abesifazane abagcwele , kudingekile ukuba bahlale emzimbeni, kodwa imibala enemibala. Ukuthanda ukudlala indima ebalulekile lapha, kodwa kufanele futhi uqaphele uhlobo lokubukeka kanye nethemba lesikhumba. Kodwa uma ufuna okuthile ngesithombe, khona-ke umthetho oyinhloko wezingubo zokugqoka - isithombe kufanele sibe mpo, ama-blouses, ama-sarafans ehlobo ne-blouses abheka kuqala. Uma lezi zi-motifs ezimbali, akufanele zibe mkhulu kakhulu.
Lapho ukugqoka izingubo
Amaphethini ama-blouses ehlobo, amahhashi, iziketi kanye nezinye izingubo zingatholakala kumamagazini akhethekile. Njengomthetho, banamaphethini okwenziwe ngomumo ngegridi yesayizi nemilayezo eningiliziwe yokuthunga. Kodwa uma ungakakulungeli ukwenza ukuzibophezela ngokwakho, kungcono ukuphendukela ku-seamstress ochwepheshe. Ukuze ulondoloze imali, kungcono ukuthola ukuthi awukho umkhiqizo, kepha ukuzenzela umkhiqizo wekhanda, ikhwalithi yokuhlunga kuzoba okufanayo, kodwa intengo yomsebenzi iyoba yinto ephansi kakhulu.
Ekuphetheni, ngifuna ukuphinda ngiphinde ngiyazi iqiniso lokuthi abesifazane ababi abakho, kukhona izingubo ezikhethiwe ezingalungile eziyiphutha. Omunye angase angavumelani, kodwa umkhuba ubonisa: izinkulungwane zabesifazane abasebenzisa ukuthambekela komuntu ngabanye, abahluphekile ngokweqile, bayaqiniseka ngalokhu. Owesifazane wanoma yisiphi isilwane angase abe ekhangayo, enhle futhi enhle.
Indlela yokwenza amakhadi othisha ngezandla zabo siqu?
Umuthi 'Gabapentin ": analogue, ukubuyekezwa, yokusetshenziswa
Indlela ulondoloze imali ukuthenga usebenzisa sesiphequluli